Etu esi wụnye ọkwọ ụgbọala Radeon kacha ọhụrụ na Ubuntu / Mint | Site na Linux
Etu esi wụnye ọkwọ ụgbọala Radeon kacha ọhụrụ na Ubuntu / Mint
Ugboko92 | | Na-atụ aro, Nkuzi / Ntuziaka / Atụmatụ
Maka ndị gị gbasoro akụkọ kachasị ọhụrụ na Phoronix, n'ezie ị nụworị na 12.4 mbipute nke ndị ọkwọ ụgbọala Ọkpụkpụ site na AMD, bu ụdị ọhụụ kedu ihe dịịrị ndị nwere kaadị Radeon 2000/3000/4000 na olee otu ọ ga - esi dị obere, ụdị a anaghị akwado X.org 1.12.
Ubuntu y Mint Site na ndabara, ha na-abịa na ndị ọkwọ ụgbọala n'efu, n'ezie karịa karịa onye nwere laptọọpụ achọpụtala okpomọkụ dị elu karịa ọkwọ ụgbọ ala na n'ọnọdụ ụfọdụ dị ka nke m, n'etiti 15 na 20 ogo dị elu. Na-achọ na Phoronix Achọpụtara m na nke a bụ eziokwu n'ezie, na ọbụghị naanị m na-arịa nsogbu a, yabụ amalitere m nyocha wee kpebie ịchọta azịza ya.
Nke mbu anyi ghaputara site na PPA a Onye ọrụ Phoronix, git xorg-server-radeon kacha ọhụrụ na, na tebụl kacha ọhụrụ wdg.
Anyị na-eso usoro ndị a:
Anyị na-agbakwunye ppa:
PPA website: https://launchpad.net/~oibaf/+archive/graphics-drivers
A na-eme ihe dị n'elu na ikpe na anyị nwere ndị ọkwọ ụgbọala na-abịa na ndabara na Ubuntu / Mint, ma ọ bụghị na anyị ga-ewepu ọkwọ ụgbọ ala fglrx site na Synaptic.
Mgbe nke a gasịrị, anyị ga-etinye ngwugwu vdpau
Iji mee ka ọ rụọ ọrụ anyị wụnye ngwugwu tebụl libg3dvl
Mgbe ahụ, anyị nwere ike iwunye mpịachi
Anyị na-anwale osooso maka mpeg2, ọ bụ ezie na n’ọdịnihu ọ dị ka ọ ga - ekwe omume ịmezi ụdị ụdị kodeks ọzọ.
Ugbu a ịlụ ọgụ na nsogbu nke ikpo oke ọkụ. Ọ bụ mmadụ ole na ole elelela ihe kpatara ya anya ma mee mkpesa banyere nsogbu ahụ, mana enwere ngwọta nke nwere ike belata ya, a na-akpọ ya profaịlụ, anyị nwere ike ịhọrọ n'etiti akpaaka, obere, etiti na elu, site na nke a anyị nwere ike ijikwa ya ike nke gpu anyi. Mụ onwe m ahapụwo ya ka ọ dị ala.
Dịka mgbanwe ahụ ga-adị nwa oge, anyị na-eme ihe ndị a ka usoro ahụ wee na-amalite na ala:
n'ime anyị na-edekwa, sị:
Mere nke a, anyị na-azọpụta.
Anyị weghachitere na anyị kwesịrị ịnwe sistemụ anyị ọhụhụ ma na arụ ọrụ zuru oke.
Ọ bụghị otu ihe ahụ dị ka iji onye ọrụ gọọmentị ATI, mana ọ dịkarịa ala onye ọkwọ ụgbọala a na-akwụ ụgwọ na-akawanye mma na n'oge na-adịghị anya anyị ga-enwe ike ịnụ ụtọ vidiyo vidiyo zuru ezu, naanị ihe na-ezighi ezi bụ ọkụ, anaghị m ' maara nke ọma banyere ya. n'ihi na, mana hey, a ga m eche ndozi.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Site na Linux » Na-atụ aro » Etu esi wụnye ọkwọ ụgbọala Radeon kacha ọhụrụ na Ubuntu / Mint
M tụbara ihe a, anyị na-azọpụta.
Ee ọma, ọ mere.
Agbanyeghị, ihe ngwọta ahụ dị mma mana na Phoronix, ha na-ekwukwa na ndị ọkwọ ụgbọ AMD na-eji nwayọọ nwayọọ na-akawanye mma, nke m na-echeghị na ọ bụ ihe a na-anabata n'ihi na asọmpi ndị ọzọ enweela nkwado OpenCL, OpenGL dị ntakịrị, mana ọ tozuru oke ma kwado X. org enweghị nsogbu. Nke ọzọ bụ mgbe wayland bịarutere, nke naanị ndị ọkwọ ụgbọala Noveau na ndị ọzọ nweere onwe ha ga-akwado, nke ga-adị mma ma ọ bụrụ na enyere Nvidia, AMD na Intel ọrụ nke ịkwado Wayland, nke Nvidia jụrụ kpam kpam mana n'ikpeazụ ọ ga-enye elu.
M hapụụrụ gị ụtọasụsụ n’aka gị, nke bụ ọpụrụiche gị. Ndị ọkwọ ụgbọala amd n'efu na-akwado ọtụtụ ihe ugbua na ndị ọzọ na-emepe emepe, na-eburu n'uche na nkwado ọkwọ ụgbọala mechiri emechi maka opencl bụ ihe jọgburu onwe ya, ị gaghị atụ anya ọtụtụ ihe na onye nweere onwe ya, anyị ga-ahụ, maka ozi ndị ọzọ ebe a:
407bọchị XNUMX na-enweghị idozi igba ahụ na akwụkwọ ọkọwa okwu ... Correct "Echo" ma nye ya h ... Emela.
Ma obu inwere ike iji beta, 12.6.
The beta 12.6 na-enweghị nkwado maka kaadị tupu usoro 5000, ọ dịkarịa ala m radeon 4650, ha anaghị arụ ọrụ.
Kedu ihe ihere ... 🙁 Nwere obere na obere aka ekpe iji tinye nke m nwere, site na usoro 5000.
Enwere ụfọdụ 5000 nke nwere isi 4000 n'ezie, enwere m olile anya na ị daabeghị otu n'ime ndị ahụ ... xD, echere m na 5000 gị ka nwere ọ dịkarịa ala afọ abụọ fọdụrụ.
Dika m ghotara ha na-ekwu na nhapụ a bụ naanị otu ugboro, dịka ihe m gụrụ, ọ bụrụ na kernel ma ọ bụ xorg ọhụrụ apụta, ndị ọkwọ ụgbọala a agaghị adịgide ma ọlị, ọ dị ka ihe ihere mana ọ dị mma ịgbanwe kaadị.
Sudo ikwughachi "ala"> / sys / klas / drm / card0 / device / power_profile
O adabara niile kaadị na ọ bụla ọkwọ ụgbọala?
Eeh, maka ihe niile ma usoro 7000, cheta na mgbe ịmalitegharịrị nhazi ahụ, belụsọ na ịchekwara ya na rc.local
Jordi Verdugo dijo
I meela nke ukwuu maka edemede a, o nyeere m aka ịnwe ọkwọ ụgbọala kachasị ọhụrụ maka ATi HD4330 m. Ihe m nwere nsogbu: A hụrụ vidiyo na YouTube na agba na-ezighi ezi. Na njedebe, ihe ngwọta ahụ dị mfe dịka iwepu nchịkọta metụtara VDPAU ebe ọ dị ka ihe ọkụ ọkụ Youtube mere ka ọ rụọ ọrụ. The na-akpa ọchị bụ na ndị ọzọ flash video weebụsaịtị dị ka Vimeo ma ọ bụrụ na agba anya ọma otú ahụ ka m chere na ọ naghị arụ ọrụ.
Ọfọn, nke a bụ nchịkọta ndị m hichapụ: vdpau-va-drivers na libg3dvl-mesa.
Ugbu a ihe niile zuru oke.
Zaghachi Jordi Verdugo
Flash adịghị mma n'ihi na ụdị ubuntu 12.04 ubuntu nwere nsogbu na ngwungwu libvdpau1 na kaadị Nvidia, ọ gaghị eju m anya ma ọ bụrụ na ihe yiri nke ahụ ị kwuru na post a mere: vdpau-va-drivers.
Na njikọ a ozi niile: http://askubuntu.com/questions/117127/flash-video-appears-blue
Zaghachi na Qugar
Imirikiti Na-agụ na Ka Anyị Jiri Linux: Mee 2012